Beat Beat itshaja engenazingcingo ngombane kunye neNkampani | Iqela
Itshaja Magnetic wireless ngentambo
Ukutshaja ngokukhawuleza kwe-15W
Itshaja engenazingcingo ye-D467 Magnetic yenzelwe ngokukodwa ulungelelwaniso lomazibuthe lwe-iPhone 12 uthotho, ii-12pcs ezakhelwe-ngaphakathi kwibhokisi yomazibuthe eyomeleleyo, umsebenzi owomeleleyo wamagnor adsorption ukuvumela ukuba uhlengahlengise i-engile ngokukhululekileyo ngaphandle kokuphambuka kwiziko kwitshaja.
Imagneti ephezulu eyakhelwe-ngaphakathi igcina itshaja isendaweni kwaye ithintela ukutyibilika. Beka iselfowuni yakho embindini wetshaja ngezona ziphumo zibalaseleyo zokutshaja.
Ngomgangatho weQi osemgangathweni, iiMagnetic Charger zixhasa izikimu zamandla ezi-4: 5W / 7.5W / 10W / 15W, Iya kulungelelanisa ngokuzenzekelayo namandla ahlukeneyo ngokwemodeli yefowuni ukuqinisekisa ukutshaja okukhawulezileyo nokukhuselekileyo kwesixhobo sakho.
Ubuninzi be-15W yoyilo lwe-magnetic ivumela, ukuze ifowuni yakho ihambelane ngokuchanekileyo kunye nekhoyili yokutshaja kwaye ibekwe kwiphedi yokutshaja ukufezekisa ukutshaja okukhawulezileyo nokuzinzileyo. Ngobuchwephesha bokhuseleko lobukrelekrele, ibonelela ngemisebenzi efana nolawulo lobushushu, i-voltage ephezulu kunye nokukhuselwa okungaphezulu ngoku, ukhuselo olufutshane lwesekethe, kunye nokufunyanwa komzimba wangaphandle.
Itshaja enemagneti iyahambelana ne-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro, i-iPhone 12 mini, i-iPhone 12 Pro Max kunye nokuhambelana neemeko zeefowuni zeMagSafe kunye neemodeli zeAirPod ezinetyala lokutshaja ngaphandle kwamacingo. Amava okulungelelanisa amandla kazibuthe asebenza kuphela kwi-iPhone 12 mini / 12/12 Pro / 12 Pro Max Ngaphandle kwetyala lesitikha semagnethi, iifowuni ngaphandle kweMag-Safe azizukuxhasa imbonakalo yemagneti.
Itshaja yeMagnetic engenazingcingo netekhnoloji yokhuselo ekrelekrele yokubonelela ngolawulo lobushushu, ukhuseleko kunye nokukhuseleka okugqithisileyo, ukhuselo olufutshane lwesekethe kunye nokufunyanwa kwento yangaphandle. Gcina ifowuni yakho ihlala ipholile kwaye ikhuselekile ngelixa ubiza
Iziphumo ezilinganisiweyo 5W / 7.5W / 10W / 15W
Okwangoku 1000mA @ 1100mA @ 1250mA
Rhoqo 127.7kHZ ± 6HZ
Izixhobo ezixhasiweyo 5W / 7.5W ye-iPhone, 10W / EPP15W ye-Samsung
Ukukhuselwa I-SCP, i-OTP, i-OCP, i-OVP
Isatifikethi I-CE / iROHS / iCCC
Egqithileyo Cacisa iMagnetic Liquid Silicone Case ye-iPhone 12 uthotho
Okulandelayo: IMagnetic 2 kwi-1 yokuTsala ngaphandle kwamacingo nge-iPhone nakwii-Airpods
Ityala leMagnetic Liquid Silicone ye-iPhone 12 uthotho
Magnetic 2 ngo-1 Wireless Ukutshaja Yima iPh ...
Cacisa iMagnetic Liquid Silicone Case ye-iPhone ...